पल्सर २२० एबीएस नै किन ? अफर, छुट र मासिक किस्ता कति ? – Khabarhouse
Khabar house | २३ बैशाख २०७८, बिहीबार १६:१६ | Comments
काठमाडौं : पल्सर २२० नेपाली बजारमा चर्चित र सफल मोटरसाइकल हो । यो मोटरसाइकल सहर, पहाड जुनसुकै ठाउँको लागि अतिनै उपउक्त मानिने मोटरसाईकल मानिन्छ । अझ भन्ने हो भने पहाडी भेगका ग्राहकले पल्सर २२० लाई अझै धेरै विश्वसनीय मोटरसाइकल मान्ने गरेका छन् । यस मोटरसाइकलमा २२० सीसी क्षमताको पावरफुल इन्जिन, ८५०० आरपीएम, २०।६४ हर्ष पावरका साथै ७००० आरपीएममा १८।५५ एनएम टर्क, र इन्जिनमा पाँच स्पीड गियरबक्स लगाइएको हुन्छ ।
यस मोटरसाइकलको सीट हाइट ७९५ एमएम र टप स्पीड क्षमता प्रतिघण्टा १३४ किलोमिटर रहेको छ । यस मोटरसाइकल तौल १५५ किलोग्रामको छ भने बाइकमा १६५ एमएमको ग्राउन्ड क्लियरेन्स रहेको छ । यस इन्धन क्षमता १५ रहेको छ । हंशराज हुलास चन्द एण्ड कम्पनीले केही समय अघि बजारमा एबीएस सहितको पल्सर २२० लकडाउन सुरु हुनु केही दिनअघि मात्रै नेपाल आएको थियो ।
नेपाली बजारमा एबीएस भर्सनको मूल्य ३ लाख ५० हजार ९०० रहेको छ । १५० सि सि सम्मका बाईकहरुमा मिनिमम २०%, १५१ सि सि माथिका बाईक हरुमा मिनिमम ३०% र ५० प्रतिशतमा डाउन पेमेन्टमा ०% प्रतिशत व्याजमा लिन सक्नेछ । २२० एबीएस मासिक किस्ता रु ९७४७ रहेकोछ । नयाँ वर्षको अफर क्यासमा रु. १०,००० देखि १०००००० सम्मको सून्य अफर रहेको छ ।